Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Senegal » Senegal, Nyika Itsva yeVakundi, Magamba uye Chiono cheAfrica cheKushanya
Senegal, Nyika Itsva Yevakundi, Magamba uye Chiono cheAfrica cheKushanya
Senegal, zviri pamutemo Republic of Senegal, inyika iri kuWest Africa. Senegal yakaganhurwa neMauritania kuchamhembe, Mali kumabvazuva, Guinea kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva, uye Guinea-Bissau kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero.
enegal inozivikanwa nekuve nyika yakachengeteka ine vagari veko vane hushamwari. Umbavha uye mhosva dzechisimba kune vashanyi hazviwanzo.
Nzvimbo iri kumavirira kweAfrica hazvizivikanwi nevashanyi vanotaura chiRungu. Nekudaro, Senegal inyika umo tsika dzakapfuma uye runako rwemusikirwo zvinosangana kuita basa guru. Vafambi veFrance vanga vachinakirwa nemahombekombe eSenegal ane jecha uye mameseji akaumbwa kubva kuma1970.
Dakar imusha kune yakajairika uye yechinyakare, yeSenegal yekare uye nyowani. Iguta rinonakidza kutamba, kuvhima-kutengesa, uye tsika dzechokwadi. Munharaunda yakasununguka yeMamelles, La Calebasse inzvimbo yakanaka yekuenzanisa chikafu chechinyakare cheAfrica padenga rakavharwa.
Vatungamiriri muindasitiri yekufambisa uye yekushanya munyika ino yeWest Africa vanofara uye vanonzwisisa mufananidzo mukuru weAfrican Tourism. Musvondo rapfuura, hwindo remukana wakasarudzika weSenegal kutora hutungamiriri muAfrica mukubatsira kune indasitiri yakakura kwazvo pasirese, kufamba, uye kushanya kwakave pedyo zvakanyanya.
Mr. Deme Mouhamed Faouzou, chipangamazano chepamusoro kugurukota rezvekushanyirwa kwenyika, mumiriri weAfrican Tourism Board, nhengo yeWorld Tourism Network, uye akapa chete Tourism Hero kusarudzwa kuWest Africa anonzwisisa izvi.
HE Macky Saall, Mutungamiri weSenegal
Just on Saturday the Heads of State and Government of the African Union (AU) vakasarudzwa Iye Macky Sall, Mutungamiri weRepublic of Senegal, saSachigaro mutsva wesangano rakakosha iri rekubatana kweAfrica.
Mukutaura kwavo kugamuchirwa, Mutungamiri Macky Sall vakati vanotenda ruremekedzo rwakabatana nebasa uye chivimbo chakaiswa mumunhu wake, uye nhengo dzeBureau nyowani, kutungamira mafambiro eSangano mugore rinotevera. "Ndinokutendai uye ndinokuvimbisai nezvechisungo chedu chekushanda pamwe nenyika dzese dziri nhengo mukuita basa redu" akadaro Sachigaro anouya weMubatanidzwa. “Ndinopa rukudzo kune vakavamba Sangano. Makumi matanhatu emakore gare gare, chiono chavo chinopenya chiri kuramba chichikurudzira kugara kwedu pamwe chete uye kuvhenekera kufora kwedu takabatana takananga kune yakanaka yekubatanidzwa kweAfrica ”akawedzera.
Kubatanidzwa kweAfrica ndizvo zvinodiwa nevekufambisa uye indasitiri yekufambisa uye yekushanya muAfrica. Dr. Walter Mzembi, sachigaro weWorld Tourism Network Africa Chapter vataura nezuro muhurukuro yavo kumusangano United Nations African Business Forum: ” Zviripachena, Tourism, semamwe masangano ezvehupfumi akadai seTrade and Commerce, Agriculture and Mining, yakakosha zvekuti zvinoda kuti pave nemasangano akazvimirira ega kuAU kuvaka kubatana kwekondinendi, kutaura zvinonetsa zvinosangana uye kugadzirisa matambudziko kuti ave nechokwadi. kukwikwidza kwechikamu padanho rekondinendi.
Mitambo, Tourism. uye rugare rwagara rwuri mubatanidzwa.
Mutungamiri Macky Sall aive mumwe weavo vaikwazisa chikwata cheSenegal svondo rino panhandare yendege mushure mekuhwina mukombe weAfrica Cub of Nations kekutanga mumakore makumi matanhatu emwana uyu.
Kunze kwemutungamiri wenyika, makumi ezviuru zvevatambi vemufaro vakapemberera kudzoka kwevatambi kuDakar, vakagara pamusoro pemota uye vachitamba mumigwagwa yeguta guru.
Kunyangwe muguta guru reFrance, Paris, kumusha kune nharaunda huru yeSenegal, zviuru zvevatsigiri zvakapemberera mukuungana paArc de Triomphe.
Senegal vakakundwa Egypt 4-2 nemapenalty muAfrica Cup of Nations yakatambirwa neAlgeria mufainari mushure mekunge zvikwata izvi zvatadza kupatsanurwa mukati memaminitsi zana nemakumi maviri enhabvu isina zvibodzwa.
World Tourism Member muSenegal Deme Mouhamed Faouzou, Dakar, uyo ari zvakare chipangamazano weBazi rezvekushanya nendege muSenegal, mumiriri weAfrican Tourism Board, uye anodada anogamuchira World Tourism Hero kudomwa neWorld Tourism Network kunofara zvakapetwa kaviri.
Akaudza eTurboNews: “Munhu wese weSenegal, mhuri yese, munhu wese anonzwira tsitsi, akaisa mari, simba, nguva, uye manzwiro kuitira kuti Senegal ihwine mukombe uyu. Zvinouya paawa yakasarudzika, kubva mukumutsiridza hupfumi hwedu, kunyanya kushanya, uko kwave nehutsinye, uye nekumberi, kukanganiswa neCCIDID 19. "
"Kukunda uku, kupfuura mufaro nemhemberero, kunofanirwa kutariswa pachinangwa chayo chikuru, chinosara uye chinoramba chiri kusimudzira kweSenegal. Tinofanirwa kuratidza izvo kwatinoenda kunopa uye kutengesa kunyika. "
“Rova simbi kana yava kupisa. Yave nguva yekuti tibatane tichitenderera, nematarenda edu uye neruzivo rwedu rwekusimudzira Senegal yese. “
"Sezvo ndiri wekutanga weSenegal neWest Africa kupihwa mubairo wegamba rekushanya pasi rose, ndinofanira kubatanidza zvinhu zvitatu izvi kurwisa kushanya kune kufarira vanhu nehupfumi hwedu."
Deme Mouhamed Faousuzou akawedzera kuti: “Tinogona kugadzira hurongwa hwekutaurirana uye zvinopa zvekusimudzira zveSenegal senzvimbo yekufambisa. Mumwe nemumwe mutambi wenhabvu anofanirwa kunzi mumiriri wedunhu rake, kusimudzira tsika dzenzvimbo dzedu.
Karavhani inofanirwa kurongeka, nevatambi kuti vafambe nenyika kunoratidza kushanya kwemumba, kuitira kuti vape ruremekedzo kune mumwe nemumwe weSenegal, nekuita mukukunda.
Chekupedzisira, mutambi wega wega anofanirwa kuita mumiriri wezvekushanya uye mumiriri weAfrican Sports kusimudzira kushanyirwa kwematunhu nepakati pematunhu muAfrica.
Vachitsigirwa neAfrica Tourism Board neWorld Tourism Network VaDeme vakagumisa kuti: “Iyi ibasa rangu sechipangamazano chehunyanzvi kugurukota rezvekushanyirwa kwenyika.
Juergen Steinmetz, sachigaro weWorld Tourism Network akati: “Tinobvumirana zvachose uye tinotsigira gamba redu rekushanyirwa kwenyika VaDeme mukuongorora kwavo kukosha kwenzira yakabatana yekushanya muSenegal nekondinendi yeAfrica. Parizvino, mukana wekuenderera mberi nehurongwa hunoshanda uye Senegal muchigaro chemutungamiri wakakura. "
Africa African Union kurima Arujeriya Business Covid hurumende Sangano Senegal ushanyi senga United Nations West Africa
Houston's Newest Luxury Hotel Inotanga neInnovative Opening Ceremony Inopindwa naHouston Notables.
COVID-19 muAmerica: Hunhu huripi?